Otu onye ogbugbo - IntegritySyndicate.com
Mbido Ịdị n'otu nke Akwụkwọ Nsọ Otu Onye Ogbugbo
E nwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs
Chineke abụghị mmadụ
Mesaịa nke amụma bụ ohu Chineke nke mmadụ - Onye e tere mmanụ
Jizọs bụ Nwa nke mmadụ nke amụma
Adam bụ ihe atụ nke onye gaje ịbịa - Jizọs bụ Adam ikpeazụ
Aja mgbaghara mmehie site na anụ arụ na ọbara nke Mesaịa nke mmadụ (Kraịst)
Jizọs, onye isi nchụàjà anyị na -agba ọgbụgba ndụ ka mma n'ọbara nke ya
Jesus edi asan̄autom Abasi
Otu Chineke na Nna bụ Chineke na Nna Jizọs
Chineke onye nzọpụta anyị buliri Jizọs elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta
A kara Ọkpara nke mmadụ ikpe ụwa ikpe n'ezi omume
Omume mmadụ nke Kraist dị mkpa maka ozi -ọma. Chineke abụghị mmadụ mana Mesaịa nke amụma bụ onye na -ejere Chineke ozi nke mmadụ - onye e tere mmanụ dị ka Jizọs bụ Nwa nke mmadụ nke amụma amụma. Adam bụ ihe atụ nke onye gaje ịbịa na Jizọs bụ Adam ikpeazụ. Aja mgbaghara mmehie bụ site na anụ arụ na ọbara nke Mesaịa nke mmadụ (Kraịst). Jizọs, onye isi nchụàjà anyị na -agba ọgbụgba ndụ ka mma n'ọbara nke ya. Jizọs bụ ohu Chineke nke na -ekpechite ọnụ anyị. Otu Chineke na Nna bụ Chineke na Nna Jizọs. Chineke onye nzọpụta anyị buliri Jizọs elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta. A kara Ọkpara nke mmadụ ikpe ụwa ikpe n'ezi omume.
Ejiri 1 Tim 2: 5-6 dịka eziokwu nke Oziọma. Kedu ihe bụ eziokwu a? A chịkọtara ya dị ka ndị a:
Chineke abụghị mmadụ ma ọ bụ na -ata ahụhụ adịghị ike nke mmadụ. Eluigwe enweghị ike ịnwe Chineke, ma ọ bụ ahụ mmadụ. Mmadụ na -anwụ anwụ, Chineke anaghị anwụ anwụ.
Ọnụ Ọgụgụ 23: 19-20, Chineke abụghị mmadụ, ma ọ bụ nwa nke mmadụ
19 Chineke abụghị mmadụ, na ọ ga -agha ụgha, ma ọ bụ nwa nke mmadụ, na ọ ga -agbanwe obi ya. Ọ sị, ọ gaghị eme ya? Ma -ọbu ò kwuwo okwu, ma ọ gaghi -emezu ya? 20 Le, anatara m iwu ịgọzi: ọ gọziwo, enweghịkwa m ike ịkagbu ya.
1 Samuel 15: 28-29, Ọ (YHWH) abụghị mmadụ
28 Samuel wee sị ya:Chineke Ọ dọkawo ala -eze Israel n'iru gi ta, nye ya onye -ab neighborata -obi -gi nke di nma kari gi. 29 Ọzọ kwa, Ebube Israel agaghi -ekwu okwu -ugha, ọ gaghi -akwa kwa ụta; n'ihi na ọ bughi nwoke, na ọ ga -akwa ụta. ”
Hosea 11: 9, "Abụ m Chineke, abụghị m mmadụ"
9 Agaghị m emezu iwe m dị ọkụ; M'gaghi -ebibi kwa Efraim ọzọ; n'ihi na Mu onwem bu Chineke, abughi madu, Onye Nsọ nọ n'etiti gị, agaghị m abịa n'iwe.
Abụ Ọma 118: 8-9, Ọ dị mma ịgbaba n'ime JEHOVA karịa ịtụkwasị mmadụ obi
8 Ọ dị mma ịgbaba n'ime Jehova karịa ịtụkwasị mmadụ obi. 9 Ọ dị mma ịgbaba n'ime Jehova karịa ịtụkwasị ndị isi obi.
1 Ndị Eze 8:27, Eluigwe na elu kachasị elu enweghị ike ịnabata gị
27 "Ma Chineke ọ ga -ebi n'elu ụwa n'ezie? Le, elu -igwe na elu kachasị elu agaghị enwe ike ịnabata gị; ma -ọbu ulo a nke m'wuworo!
Ọrụ 7: 48-50, Onye Kasị Elu anaghị ebi n'ụlọ ejiri aka rụọ
48 Ma Onye Kasị Elu anaghị ebi n'ụlọ ejiri aka rụọ, dika onye -amuma kwuru, 49 “'Eluigwe bụ ocheeze m, ụwa bụkwa ihe mgbakwasị ụkwụ m. Olee ụdị ụlọ unu ga -ewuru m, ka Jehova kwuru, ma ọ bụ gịnị bụ ebe izu ike m?50 Ọ bughi akam mere ihe ndia nile?
Ndị Rom 1: 22-23, Chineke na-adịghị anwụ anwụ-mmadụ na-anwụ anwụ
22 N'ikwu na ha nwere amamihe, ha ghọrọ ndi -nzuzu, 23 wee gbanwere ebube Jehova Chineke na -adịghị anwụ anwụ maka onyonyo yiri mmadụ efu na nnụnụ na anụmanụ na ihe na -akpụ akpụ.
1 Timoti 1:17, Chineke nke na -adịghị anwụ anwụ
17 Maka Eze nke afọ, anwụ anwụ, enweghị ike ịhụ anya, onye naanị ya bụ Chineke, bụrụ nsọpụrụ na otuto ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
1 Timoti 6:16, Onye naanị ya nwere anwụghị anwụ
16 onye nanị ya nwere anwụghị anwụ, onye bi n'ìhè a na -apụghị ịbịaru nso, onye ọ na -ahụtụbeghị ma ọ bụ hụ ya anya. Ọ bụ ya nwe nsọpụrụ na ịchịisi ebighi ebi. Amen.
Amụma Mesaịa nke Agba Ochie (Tanakh) na -akọwa Nwa nke mmadụ na -abịa dị ka onye nnọchi anya Chineke nke Chineke ga -esite na ya guzobe ọkwa nchụ -aja na ala -eze ebighi -ebi.
Deuterọnọmi 18: 15-19 (ESV), "Chineke ga-eme ka onye amụma biliere gị-aga m etinye okwu m n'ọnụ ya"
15 "Jehova bụ́ Chineke gị ga -esi n’etiti gị, n’etiti ụmụnne gị, kpọlitere gị onye amụma nke dị ka m, ọ bụ ya ka ị ga -ege ntị.- 16 dika unu riọrọ n'aka Jehova, bú Chineke -unu, na Horeb n'ubọchi nkpọkọta ahu, mb youe unu siri, Ka m ghara ịnụkwa olu Jehova Chineke m ọzọ ma ọ bụ hụ nnukwu ọkụ a ọzọ, ka m wee ghara ịnwụ. 17 Jehova we sim, 'Ihe ha kwuru ziri ezi. 18 M ga -esi n'etiti ụmụnne ha họpụtara ha onye amụma dị ka gị. M'g puttiye kwa okwum nile n'ọnu -ya, ọ gāgwa kwa ha okwu nile nke M'g commandnye ya n'iwu. 19 Ma onye ọ bụla nke na -agaghị anụ okwu m nke ọ ga -ekwu n'aha m, mụ onwe m ga -ajụ ya.
Abụ Ọma nke 2 (KJV), ndị eze nke ụwa guzoro megide Jehova na imegide onye o tere mmanụ
1 Gịnị mere ndị mba ọzọ ji ewe iwe, ndị mmadụ na -echekwa ihe efu? 2 Ndi -eze uwa n setguzo onwe -ha, Ndi -isi nāb takeakọta kwa ìzù imegide Jehova, na imegide onye -Ya etere manu, 3 Ka anyị tijie agbụ ha, ma tụfuo ụdọ ha. 4 Onye ahụ nke nọ ọdụ n'eluigwe ga -achị ọchị: Onyenwe anyị ga -akwa ha emo. 5 Mgbe ahụ ka ọ ga -agwa ha okwu n'iwe ya, wee kpasuo ha iwe nke ukwuu. 6 Ma mu onwem emewo ka ezem guzosie ike n'elu ugwu nsọ m nke Zaịọn. 7 M ga -akpọsa iwu: Jehova asiwom, Ọkparam ka i bu; taa m mụrụ gị. 8 Rịọ m, m ga-enye gị ndị mba ọzọ ka ha bụrụ ihe nketa gị, m ga-enyekwa gị nsọtụ niile nke ụwa ka ọ bụrụ ihe nketa gị. 9 I g shaltji nkpa-n'aka ígwè tijisie ha; i gashwere ha dika iberibe ite-ite. 10 Ya mere, mara ihe, unu ndi -eze: kuzienu ihe, ndi -ikpe nke uwa. 11 Werenu egwu fè Jehova òfùfè, were -kwa -nu jijiji tegharia egwú ọ rejoiceù. 12 Susuo Ọkpara ahụ ọnụ, ka ọ ghara iwe iwe, wee laa n'iyi n'ụzọ, mgbe iwe ya ga -adị ọkụ ntakịrị. Ngọzi na -adịrị ndị niile tụkwasịrị ya obi.
(Abụ Ọma 8: 4-6) “I nyewo ya ikike ịchị ọrụ aka gị.”
Abụ Ọma 110: 1-6: “Jehova sịrị Onyenwe m”
1 Jehova wee sị Onyenwe m: "Nọdụ ala n'aka nri m, Ruo mgbe m ga -eme ndị iro gị ka ihe mgbakwasị ụkwụ gị. " 2 Jehova si na Zaịọn zipụ mkpanaka gị dị ike. Na -achị n'etiti ndị iro gị! 3 Ndị gị ga -eji onwe ha nye onwe ha n'ụbọchị ike gị, n'uwe nsọ; site n'akpa nwa ụtụtụ, igirigi nke ntorobịa gị ga -abụ nke gị. 4 Jehova a swornụwo iyi na ọ gaghị agbanwe obi ya, "Ị bụ onye nchụàjà ruo mgbe ebighị ebi dika usoro Melkizedek si dị. ” 5 Onyenwe anyị nọ n'aka nri gị; Ọ g willtipia ndi -eze n'ubọchi iwe -Ya. 6 Ọ g willme kwa ihe ekpere n'ikpe n'etiti mba nile, were ozu mejue ha; ọ g willtipia ndi -isi n'elu uwa sara mbara.
Isaiah 9: 6-7 (ESV), “A mụụrụ anyị otu nwa, nye anyị otu nwa nwoke”
—Aịzaya 9: 6
A mụụrụ anyị nwa, a na -enyekwa nwa nwoke: Nwa nwoke a ka a ga -enye ma mụọ ya n'ọdịnihu.
Ọchịchị abịabeghị n'ubu ya -ọ ga -adị
Utu aha / aha ndị a bụ ihe a ga -akpọ ya (ọ bụghị ihe ndị a na mbụ)
“Chineke Nke bụ Dike” na -ezo aka n'ike na ikike kachasị elu ọ ga -enwe n'alaeze a nke o guzobere ma kwado. Mesaịa ahụ nwere ikike dị nsọ dịka onye nnọchi anya Chineke họpụtara ka ọ chịa ụwa n'ezi omume. Enwere ike ịkpọ ndị nnọchi anya Chineke “Chukwu” dabere n'echiche nke inwe nnọchite anya. lee https://biblicalagency.com
“Nna ebighi ebi” metụtara ya na -eme ka alaeze a guzosie ike (ịbụ nna guzobere) yana ịbụ onye na -achị (nna ochie) nke alaeze ahụ ọ ga -akwado.
Nke a bụ Mesaịa nke mmadụ nke ga -anọkwasị n'ocheeze Devid
Ekworo nke Jehova nke ụsụụ ndị agha ga -emezu inye anyị nwa nwoke na itinye ọchịchị ya n'ubu ya. Enwere ọpụrụiche doro anya ebe a site na nwa nwoke enyere na Jehova nke ụsụụ ndị agha na -enye ọmụmụ ya na akara aka ya ịnata ike na ikike.
Aisaia 11: 1-5 IGBOB-Ome nke sitere n'úkwù osisi Jesi-Mọ nke Jehova gādakwasi ya
1 Ome ga -esi n’úkwù osisi Jesi pụta, alaka nke sitere na mgbọrọgwụ ya ga -amị mkpụrụ. 2 Mmụọ Jehova ga -adakwasị ya,
Mọ nke amam -ihe na nghọta, Mọ nke ndum -ọdu na idi -ike, Mọ nke ihe -ọmuma na egwu Jehova. 3 Ihe na -atọ ya ụtọ ga -abụ ịtụ egwu Jehova. Ọ gaghi -ekpe ikpe site n'ihe anya -ya nāhu, ọ gaghi -eji ihe nti -ya abua kpe ikpe, 4 ma ọ ga -eji ezi -omume kpee ndị ogbenye ikpe, ma jiri ikpe ziri ezi kpee ikpe maka ndị dị umeala n’obi nke ụwa; ọ g hewere kwa nkpa -n'aka nke ọnu -ya tie uwa, were kwa ume nke eb lipsub lipsere -ọnu -ya b killue ndi n wickedmebi iwu. 5 Ezi omume ga -abụ ájị n'úkwù ya, ikwesị ntụkwasị obi ga -abụ ájị n'úkwù.
Aisaia 42: 1-4 (IGBOB), le, odibo m, onye m na-akwado, onye m hoputara
1 Lee nwa odibo m, onye m na -akwado, onye m họọrọ, onye ihe ya na -atọ mkpụrụ obi m ụtọ; Etinyewo m ya Mmụọ m; ọ ga -ewepụtara mba niile ikpe ziri ezi. 2 Ọ gaghị eti mkpu ma ọ bụ welie olu ya elu, ma ọ bụ mee ka a nụ ya n'okporo ámá; 3 ọ gaghị agbaji ahịhịa amị e chihịara echihịa, ọ gaghịkwa emenyụ ogho oriọna na -enwusi ike; ọ ga -eji ikwesị ntụkwasị obi wepụta ikpe ziri ezi. 4 Ọ gaghị ada mbà, ọ gaghịkwa ada mbà ruo mgbe o guzobere ikpe ziri ezi n'ụwa; ndi bi n'agwe -etiti n waitche kwa iwu -Ya.
Aisaia 52: 13-15: “Ohu m ga-eji amamihe mee ihe, ọ ga-efesakwa ọtụtụ mba”
13 Le, ohu m ga -eji amamihe mee ihe; ọ ga -adị elu ma bulie ya elu, a ga -ebulikwa ya elu. 14 Dị ka ọtụtụ tụrụ gị n'anya - ọdịdị ya dị oke egwu, karịrị nke mmadụ, na ụdị ya karịrị nke ụmụ mmadụ— 15 ọ g shallfesa kwa ọtutu mba. Ndị eze ga -emechi ọnụ ha n'ihi ya, n'ihi na ha na -ahụ ihe a na -agwaghị ha, ihe nke ha na -anụbeghị ka ha ghọtara.
Isaiah 53: 10-12 (ESV), "Ọmụma m ga-eme ka onye ezi omume, ohu m, mee ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume"
Aisaia 53 (KJV) - Site n'ọmụma ya ka onye ezi omume m ga -agụ ọtụtụ ndị n'onye ezi omume; n'ihi na Ya onwe -ya g bearbu ajọ omume -ha
1 Nye kwere akụkọ anyị? ònye kwa ka ekpughere ogwe -aka Jehova? 2 N'ihi na ọ ga-eto n'ihu ya dị ka a nro osisi, na dị ka a mgbọrọgwụ nke a n'ala akọrọ: o mewo ọ dịghị ọdịdị ma ọ bụ comeliness; na mgbe anyị ga-ahụ ya, ọ dịghị mma ka anyị chọsie ya. 3 Ndị mmadụ na -eleda ya anya ma jụ ya; nwoke iru uju, marakwa iru uju: anyị wee zoo ya dị ka a ga -asị na anyị nwere ihu anyị; eledara ya anya, ma anyị ejighị ya kpọrọ ihe.
4 N'ezie ọ buruwo ihe mgbu anyị, burukwa ihe mgbu anyị: ma anyị weere ya ka onye e tiri ihe, onye Chineke tiri ihe na onye nọ na mkpagbu. 5 Ọ merụrụ ahụ n'ihi njehie anyị, onye a pịara apịa n'ihi ajọ omume anyị: ntaramahụhụ nke udo anyị dịkwasịrị ya; ọ bu kwa ubiri -utari -ya ka ejiri me ka aru -ayi di ike. 6 Anyị niile kpafuru akpafu dị ka atụrụ; ayi echewo ihu, onye ọ bula n'uzọ nke aka ya; Jehova we tukwasi ya ajọ omume nke ayi nile. 7 A na -emegbu ya, a na -emekpakwa ya ahụ, ma o mepeghị ọnụ ya. a na -ebute ya dị ka nwa atụrụ maka ogbugbu, na dị ka atụrụ dara ogbi n'ihu ndị na -akpacha ya ajị, otu a ka ọ na -asagheghị ọnụ ya. 8 Ewepuru ya n'ulo -nkpọrọ na ikpé: ònye g declaregosi kwa ọb hisọ -ya? n'ihi na ebipuru ya n'ala ndi di ndu: n'ihi njehie nke ndim ka etibricuru ya. 9 O me ka ili ya ndị ajọ omume, ya na ogranya no kwa n'onwu ya; n'ihi na o mere ọ dịghị ihe ike, ma ọ bụ aghụghọ ọ bụla dị n'ọnụ ya.
10 Ma ọ tọrọ Jehova utọ izọpia ya; o mewo ya ka ọ nwee mwute: mgbe ị ga -eme ka mkpụrụ obi ya bụrụ àjà mmehie, ọ ga -ahụ mkpụrụ ya, ọ ga -eme ka ụbọchị ndụ ya dị ogologo, ihe na -atọ Jehova ụtọ ga -agakwa nke ọma n'aka ya.. 11 Ọ ga -ahụ maka ihe mgbu nke mkpụrụ obi ya na -eme, ọ ga -enwekwa afọ ojuju. site n'ọmụma ya ka ohu m onye ezi omume ga -agụ ọtụtụ ndị n'onye ezi omume; n'ihi na Ya onwe-ya g bearbu ajọ omume-ha. 12 N'ihi nka ka m'g dividekesa ya òkè n'etiti ndi bara uba, o g shallso kwa ndi nile kwata ihe-nkwata; n'ihi na ọ wusiwo nkpuru -obi -ya rue ọnwu: ewe gua ya na ndi -njehie; o we b theru nmehie nke ọtutu madu, we riọ ndi -njehie aririọ.
N’ime Testament Ọhụrụ nile, a kọwara Jisus dịka Nwa nke Mmadụ - Onye E Tere Mmanụ - Mesaịa nke amụma.
Matiu 12: 15-21, Lee, odibo m nke m họpụtara, onye m hụrụ n'anya nke ihe ya masịrị mkpụrụ obi m.
15 Ebe Jisọs matara nke a, o si ebe ahụ pụọ. Ọtutu madu we so Ya, O we me ka aru -ha nile di ike 16 O nyekwara ha iwu ka ha ghara ime ka a mara ya. 17 Nke a bụ iji mezuo ihe ekwuru site n'ọnụ Aịzaya onye amụma: 18 "Lee, odibo m nke m họpụtara, onye m hụrụ n'anya nke ihe ya masịrị mkpụrụ obi m. M ga -etinye mmụọ m n'ahụ ya,
ọ ga-ekwupụtakwa ikpe ziri ezi nye ndị Jentaịl. 19 Ọ gaghị ese okwu, ọ gaghịkwa etisi mkpu ike, ọ dịghịkwa onye ga -anụ olu ya n'okporo ámá; 20 ọ gaghị agbaji ahịhịa amị e chihịara egwepịa, ọ gaghịkwa emenyụ ogho oriọna na -akwụ anwụrụ, ruo mgbe ọ ga -eme ka ikpe ziri ezi nweta mmeri; 21 na n'aha ya ndị mba ọzọ ga-atụ anya. "
Luk 9: 21-22, Nwa nke mmadụ (Kraịst / Mesaya) ga-egburịrị, na a ga-akpọlite ​​ya n'ụbọchị nke atọ
18 Ugbu a, o mere na ka ọ na -ekpe ekpere naanị ya, ndị na -eso ụzọ ya na ya nọ. O wee jụọ ha, "donye ka ìgwè mmadụ ahụ na -asị na m bụ?" 19 Ha we za, si, Jọn Baptist. Ma ndi ọzọ nāsi, Elaija, na ndi ọzọ, na otù onye nime ndi-amuma mbu ebiliwo. 20 Mgbe ahụ ọ sịrị ha, "Ma onye ka unu na -asị na m bụ?" Na Pita zara, "Kraist nke Chineke. " 21 O we kwusi ike ma gwa ha ka ha ghara igwa onye a ihe a, 22 si, “Nwa nke mmadụ aghaghị ịta ahụhụ nke ukwuu, ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị odeakwụkwọ ga -ajụkwa ya, wee gbuo ya, a ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị nke atọ.. "
Luk 22:37, Akwụkwọ Nsọ ga -emezurịrị n'ime m
37 N'ihi na asim unu Akwụkwọ Nsọ a aghaghị imezu n'ime m: 'E wee gụnye ya na ndị na -emebi iwu.' N'ihi na ihe e dere banyere m nwere mmezu ya. "
Luk 24: 44-47, Ihe niile edere gbasara m ga-emezurịrị
44 O wee sị ha, “Ndị a bụ okwu m nke m gwara unu mgbe mụ na unu ka nọ, ihe niile edere gbasara m n'iwu Moses na ndị amụma na abụ ọma ga -emezurịrịd. ” 45 Mgbe ahụ o meghere uche ha iji ghọta Akwụkwọ Nsọ, 46 wee sị ha, "Otú a ka edeworo ya n'akwukwọ nsọ, na Kraist aghaghi ihu ahuhu, na n'ubọchi nke -atọ o si na ndi nwuru anwu bilie, 47 ka e kwusaakwa nchegharị maka mgbaghara nke mmehie n hisaha ya nye mba niile, malite na Jeruselem.
John 3: 14-16, Nwa nke mmadụ ga-ebuli ya elu
14 Ma dika Moses weliri agwọ n'ọhia, otú a aghaghi iweli Nwa nke madu elu, 15 ka onye ọbụla kwere na ya wee nwee ndụ ebighi -ebi. 16 “N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, na Ọ nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọ bụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi.
Ọlụ Ndị Ozi 3: 18-26, Ndị amụma niile kwurula-kwupụtakwara ụbọchị ndị a-Chineke, mgbe ọ kpọlitere ohu ya
18 Ma ihe Chineke buru n'amụma site n'ọnụ ndị amụma niile, na Kraist ya ga-ata ahụhụ, o mezuru. 19 Ya mere chegharia, chigharia, ka ewe b͕apu nmehie-unu, 20 oge nke ume ume nwere ike si n'iru Onyenwe anyị, nakwa na o nwere ike izipu Kraist ahọpụta maka gị, Jizọs, 21 onye eluigwe ga -anabata ruo oge iweghachi ihe niile nke Chineke kwuru site n'ọnu ndi -amuma -Ya di nsọ ogologo oge gara aga. 22 Moses we si, Onye -nwe -ayi Jehova g willme ka onye -amuma, nke di ka mu onwem, biliere gi site n'etiti umu -nne -gi. Ị ga -ege ya ntị n'ihe ọ bụla ọ ga -agwa gị. 23 Ọ gēru kwa, na nkpuru-obi ọ bula nke nāgaghi-ege nti onye-amuma ahu, agēbipu ya n'etiti ndi Israel. 24 Na ndị amụma niile kwuru, site na Samuel na ndị na -eso ya, kwukwara ụbọchị ndị a. 25 Unu bụ ụmụ ndị amụma na ọgbụgba ndụ nke Chineke na nna nna unu gbara, na -asị Abraham, 'Na mkpụrụ gị ka a ga -agọzi ezinụlọ nile nke ụwa.' 26 Chineke, ebe O mere ka odibo ya bilie, buru ụzọ zitere ya ya ka ọ gọzie gị site n'ịtụgharị onye ọ bụla n'ime gị n'ajọ omume gị. "
Ọlụ Ndị Ozi 10: 42-43, Onye amụma niile na-agbara ya akaebe
42 O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba ama na ọ bụ onye Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. 43 Ọ bụ ya ka ndị amụma niile na -agbara àmà ka onye ọ bụla nke kwere na ya nweta mgbaghara mmehie site n'aha ya. ”
Ndị Rom 15:12, Mgbọrọgwụ Jesi ga -abịa - n'ime ya ka ndị mba ọzọ ga -ele anya ya
12 Ọzọkwa Aịsaịa na -ekwu, "Mgbọrọgwụ Jesi ga -abịa, ọbụna onye ahụ nke ga -ebili ịchị ndị mba ọzọ; n'ime ya ka ndị mba ọzọ ga -ele anya ya. "
Adam bụ ụdị nke onye ahụ gaje ịbịa. A maara Jizọs dị ka nwoke nke abụọ ma ọ bụ Adam ikpeazụ. Dị ka e kere Adam mbụ na -enweghị mmehie dị ka ihe okike sitere n'aka Chineke, otú ahụ ka Adam ikpeazụ bụ. Site na nnupu isi nke nwoke mbụ, mmehie batara n'ụwa, mana site na nrube isi nke otu nwoke, a ga -eme ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị ezi omume. Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. Dị ka mmadụ nke eluigwe, otú ahụkwa ka ndị nke eluigwe nọ.
Ndị Rom 5: 12-17, Adam onye bụ ụdị nke onye ahụ gaje ịbịa
12 Ya mere, dị nnọọ ka mmehie si n'aka otu onye bata n'ụwa, ọnwụ esikwa na mmehie bata, ọnwụ wee gbasaa ruo mmadụ niile n'ihi na mmadụ niile mehiere- 13 n'ihi na nmehie di n'uwa n'ezie tutu enye iwu, ma agughi agu nmehie ebe iwu nādighi. 14 Ma ọnwụ chịrị site na Adam ruo Moses, ọbụlagodi ndị mmehie ha na -adịghị ka njehie nke Adam, onye bụ ụdị nke onye ahụ gaje ịbịa. 15 Ma onyinye a na -enye n'efu adịghị ka njehie. N'ihi na ọ bụrụ na ọtụtụ nwụrụ site na njehie nke otu onye, ​​ka amara nke Chineke na onyinye nke onyinye n'efu sitere na amara nke otu nwoke ahụ Jizọs Kraịst bara ụba maka ọtụtụ mmadụ. 16 Onyinye efu ahụ adịghịkwa ka nsonaazụ nke mmehie nke otu onye ahụ. N'ihi na ikpe na -eso otu njehie wetara amamikpe, ma onyinye a na -enye n'efu nke na -eso ọtụtụ njehie wetara ezi omume. 17 N'ihi na ọ bụrụ na, n'ihi mmehie nke otu onye, ​​ọnwụ chịrị site n'aka otu nwoke ahụ, ọtụtụ ndị ga -enweta ọtụtụ amara na onyinye nke ezi omume ga -achị na ndụ site n'aka otu nwoke ahụ Jizọs Kraịst.
Ndị Rom 5: 18-21, Site na nrube isi nke otu onye a ga-eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume
18 Ya mere, dị ka otu njehie si duga n'amamikpe maka mmadụ niile, otu ahụ ka otu omume ezi omume na -eduga mmadụ n'onye ezi omume na ndụ. 19 N'ihi na dị ka nnupụisi nke otu onye ahụ mere ọtụtụ mmadụ ka ha bụrụ ndị mmehie, otu a kwa ka nrube isi nke otu onye ahụ ga -eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị ezi omume. 20 Ugbu a iwu batara ime ka njehie baa ụba, mana ebe mmehie na -abawanye, amara na -abawanye ụba, 21 ka, ka mmehie na -achị ọnwụ, amara nwekwara ike ịchị site n'ezi omume nke na -eduga na ndụ ebighi ebi site n'aka Jizọs Kraịst Onyenwe anyị.
Ndị Filipaị 2: 8-11, O rubere isi ruo ọnwụ-ya mere Chineke ebuliri ya elu nke ukwuu
8 na ịbụ onye a hụrụ n'ụdị mmadụ, o wedara onwe ya ala site na irube isi ruo ọnwụ, ọbụnadị ọnwụ n'obe. 9 Ya mere, Chineke ebuliwo ya elu nke ukwuu ma nyekwa ya aha dị elu karịa aha niile, 10 ka ikpere nile we b bowue n'ala n'aha Jisus, n'elu-igwe na n'elu uwa na n'okpuru uwa, 11 na ire nile na -ekwupụta na Jisus Kraịst bụ Onye -nwe, iji nye Chineke Nna otuto.
Maka ịmatakwu nghọta ziri ezi nke Ndị Filipaị 2 lee https://formofgod.com - Nyocha ndị Filipaị 2 - ibuli elu abụghị ịdị adị
1 Ndị Kọrịnt 15: 12-19, Ọ bụrụ na emeghị ka Mesaya si n'ọnwụ bilie, okwukwe gị bụ ihe efu, ị ka nọkwa na mmehie
12 Ma ọ buru na anēkwusa Kraist dika onye emere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, ùnu gēsi aṅa si na nbilite-n'ọnwu adighi? 13 Ma ọ buru na nbilite-n'ọnwu nke ndi nwuru anwu adighi, ọ bughi na Kraist akpọlitewo ya. 14 na ọ bụrụ na a kpọliteghị Kraịst, mgbe ahụ nkwusa anyị bụ ihe efu, okwukwe gị bụkwa ihe efu. 15 Ọbụna a chọpụtarịrị na anyị na-ekwuhie Chineke, n'ihi na anyị gbara akaebe banyere Chineke na o bulitere Kraịst, onye ọ na-ebulighị ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na a dịghị akpọlite ​​ndị nwụrụ anwụ. 16 N'ihi na ọ buru na emeghi ka ndi nwuru anwu si n'ọnwu bilie, ọ bughi Kraist ka emere ka ha si n'ọnwu bilie. 17 Ọ bụrụkwa na a kpọliteghị Kraịst, okwukwe unu bụ ihe efu, unu ka nọkwa na mmehie unu. 18 Ndi ahu ndi dara ura nime Kraist alawo n'iyi. 19 Ọ bụrụ na ọ bụ naanị na Kraịst ka anyị nwere olile anya na ndụ a, anyị bụ ndị kacha nwee ọmịiko.
1 Ndị Kọrịnt 15: 20-26, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sitere n'aka mmadụ
20 Ma n'ezie, emere ka Kraist si na ndi nwuru anwu bilie, mkpụrụ mbụ nke ndị dara n'ụra. 21 N'ihi na dị ka ọnwụ si n'aka otu onye, ​​mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ sikwa n'aka otu onye. 22 N'ihi na dịka mmadụ niile na -anwụ n'ime Adam, otu a kwa ka a ga -eme ka mmadụ niile dị ndụ n'ime Kraịst. 23 Ma onye ọ bụla n'usoro nke ya: Kraịst mkpụrụ mbụ, emesịa n'ọbịbịa ya ndị nke Kraịst. 24 Mgbe ahụkwa ka ọgwụgwụ ga -abịa, mgbe ọ ga -enyefe alaeze ahụ n'aka Chineke Nna mgbe o bibisịrị ọchịchị niile na ikike niile na ike niile. 25 N'ihi na ọ ga -abụrịrị eze ruo mgbe o debere ndị iro ya niile n'okpuru ụkwụ ya. 26 Onye iro ikpeazụ a ga -ebibi bụ ọnwụ.
1 Ndị Kọrịnt 15: 27-28, Chineke edobela ihe niile n'okpuru ụkwụ ya
27 N'ihi na "Chineke edowo ihe niile n'okpuru ụkwụ ya." Ma mgbe ọ na -ekwu, “e doro ihe niile n'okpuru,” ọ pụtara nke ọma na ewezuga onye tinye ihe niile n'okpuru ya.. 28 Mgbe edobere ihe niile n'okpuru ya, mgbe ahụ Ọkpara ahụ n'onwe ya ga -edokwa onwe ya n'okpuru onye ahụ nke doro ihe niile n'okpuru ya., ka Chineke buru ihe nile.
1 Ndị Kọrịnt 15: 42-45, Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ-nwoke nke abụọ kpọlitere mmụọ nke mmụọ
42 Otú ahụkwa ka mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ dị. Ihe a kụrụ na -emebi emebi; ihe a kpọlitere anaghị emebi emebi. 43 A na -agha ya n'emeghị ihere; a na -ebuli ya elu n'ebube. A na -agha ya n'adịghị ike; a na -ebuli ya elu n'ike. 44 A na -akụ ya dị ka anụ ahụ́; a na -akpọlite ​​ya mmụọ nke mmụọ. Ọ bụrụ na anụ ahụ nke anụ ahụ dị, ahụ mmụọ dịkwa. 45 Otua ka edeworo ya n'akwukwọ, “nwoke mbu Adam ghọrọ ihe dị ndụ”; Adam ikpeazụ ghọrọ mmụọ na-enye ndụ. 46 Ma ọ bụghị nke ime mmụọ bụ nke mbụ kama ọ bụ nke anụ ahụ, emesịa ọ bụ nke mmụọ. 47 Madu mbu sitere n'ala, nwoke sitere n'uzuzu; nwoke nke abuo sitere n'eluigwe. 48 Dika onye ala sitere, otú a ka ndi sitere n'ájá di, otú a ka ọ di kwa nwoke nke elu -igwe, otú a ka ndi elu -igwe di kwa. 49 Dị nnọọ ka anyị buliri onyinyo nke onye ájá, otú ahụ ka anyị ga -eburukwa onyinyo nke Jehova nwoke nke elu-igwe.
1 Ndị Kọrịnt 15: 46-49, Dịka nwoke nke abụọ nke eluigwe dị, otu ahụkwa ka ndị nke eluigwe dị
46 Ma ọ bụghị nke ime mmụọ bụ nke mbụ kama ọ bụ nke anụ ahụ, emesịa ọ bụ nke mmụọ. 47 Madu mbu sitere n'ala, nwoke sitere n'uzuzu; nwoke nke abuo sitere n'eluigwe. 48 Dị ka onye ahụ sitere n'ájá, otú ahụkwa ka ndị sitere n'ájá dị, dika madu nke elu -igwe si di, otú a ka ndi elu -igwe di kwa. 49 Dị nnọọ ka anyị buliri onyinyo nke onye ájá, otú ahụ ka anyị ga -eburukwa onyinyo nke Jehova nwoke nke elu-igwe.
1 Ndị Tesalonaịka 4:14, Chineke ga -esi n'aka Jizọs kpọbata ndị dara n'ụra
14 N'ihi na ebe anyị kwenyere na Jizọs nwụrụ wee si n'ọnwụ bilie, n'agbanyeghị nke ahụ, site na Jizọs, Chineke ga -akpọbata ndị dara n'ụra
1 Ndị Tesalonaịka 5: 9-10, Chineke kara aka na anyị ga-enweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst
9 N'ihi na Chineke ekeghị anyị maka iwe, kama ka anyị nweta nzọpụta site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, 10 onye nwụrụ n'ihi anyị ka anyị nwere ike ịnọnyere ya ma anyị na -amụ anya ma anyị na -arahụ ụra.
Jizọs dị mkpa dịka nwoke gosipụtara dịka ọtụtụ amaokwu n'ime Agba Ọhụrụ gosipụtara. Ọ bụ site n'anụ ahụ ya na ọbara ka anyị na -eji kpuchie mmehie.
Luk 22: 19-20, "Iko a wụpụtara maka gị bụ ọgbụgba ndụ ọhụrụ n'ime ọbara m"
Jọn 1:29, Nwa -atụrụ Chineke nke na -ewepụ mmehie nke ụwa
Jọn 6: 51-58, Onye ọ bụla nke na-eri anụ ahụ m ma na-a drinksụ ọbara m nwere ndụ ebighi ebi
51 Abụ m achịcha na -enye ndụ nke si n'eluigwe bịa. Ọ bụrụ na onye ọ bụla erie achịcha a, ọ ga -adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Achịcha m ga -enye maka ndụ nke ụwa bụ anụ ahụ m. " 52 Mgbe ahụ ndị Juu na -arụrịta ụka n'etiti onwe ha, na -asị, "Olee otu nwoke a ga -enye anyị anụ ahụ ya ka anyị rie?" 53 Ya mere Jisus siri ha, N'ezie, n'ezie, asim unu, ọ gwụla ma unu riri anụ ahụ Nwa nke mmadụ ma drinkụọ ọbara ya, unu enweghị ndụ n'ime unu. 54 Onye ọ bụla nke na -eri anụ ahụ m ma na -a drinksụ ọbara m nwere ndụ ebighị ebi, m ga -akpọlitekwa ya n'ụbọchị ikpeazụ. 55 N'ihi na anụ ahụ́ m bụ ezi nri, ọbara m bụkwa ezi ihe ọ drinkụ drinkụ. 56 Onye ọ bụla nke na -eri anụ ahụ́ m ma na -a drinksụ ọbara m na -anọgide n'ime m, mụ onwe m anọgidekwa n'ime ya. 57 Dị ka Nna dị ndụ zitere m, m wee dị ndụ n'ihi Nna m, onye ọ bụla nke na -eri m, onye ahụ ga -adịkwa ndụ n'ihi m. 58 Nke a bụ achịcha nke si n'eluigwe rịdata, ọ bụghị dị ka achịcha nna nna ha riri wee nwụọ. Onye ọ bụla riri achịcha a ga -adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. ”
1 Jọn 4: 2, Mmụọ ọ bụla nke na -ekwupụta na Jizọs Kraịst abịa n'anụ ahụ sitere na Chineke
2 Site na nke a ị maara mmụọ nke Chukwu: mmụọ ọ bụla nke na -ekwupụta na Jizọs Kraịst bịara n'anụ ahụ si na Chineke
2 Jọn 1: 7, Ndị na -ekwetaghị ọbịbịa Jizọs Kraịst n'anụ ahụ bụ ndị nduhie
7 N'ihi na ọtụtụ ndị nduhie abawo n'ụwa, ndị ahụ na -anaghị ekwupụta ọbịbịa nke Jisus Kraịst n’anụ arụ. Onye dị otu a bụ onye nduhie na onye na -emegide Kraịst.
Ndị Rom 3: 23-26, Chineke wepụtara Kraịst (Mesaya) Jizọs dị ka àjà ime udo site n'ọbara ya
23 n'ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. 24 ewe me ka ha zie ezi site n'amara -ya dika onyinye, site na mgbapụta nke dị n'ime Kraịst Jizọs, 25 onye Chineke wepụtara n'ihu ya ka ọ bụrụ ihe ime udo site n'ọbara ya, ka a nabata gị n'okwukwe. Nke a bụ iji gosi ezi omume Chineke, n'ihi na n'ime ntachi obi ya dị nsọ ọ gafere mmehie mbụ. 26 Ọ bụ igosi ezi omume ya ugbu a, ka o wee bụrụ onye ezi omume na onye ziri ezi nke onye nwere okwukwe na Jizọs.
Ndị Rom 5: 6-11, Anyị na Chineke dị ná mma site n'ọnwụ nwa ya
6 N'ihi na, mgbe anyị ka bụ ndị na -adịghị ike, Kraịst nwụrụ n'oge kwesịrị ekwesị maka ndị na -adịghị asọpụrụ Chineke. 7 N'ihi na ọ ga -esiri mmadụ ike ịnwụ maka onye ezi omume - n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịnwa mmadụ nwụọ maka ezi mmadụ ịnwụ- 8 ma Chineke na -egosi ịhụnanya ya nʼihi na Kraịst nwụrụ maka anyị mgbe anyị ka bụ ndị mmehie. 9 N'ihi ya, emewo ka ayi buru ndi ezi omume ugbu a site n'ọbara ya, ayi onwe -ayi gesi azọputa ayi n'iwe Chineke. 10 N'ihi na asi na mb wee ayi bu ndi -iro anyị na Chineke dị n’udo site n’ọnwụ Ọkpara ya, nke ka nke, ugbu a anyị na -adị ná mma, ka a ga -azọpụta anyị site na ndụ ya. 11 Karịa nke ahụ, anyị na -a rejoiceụrịkwa ọ inụ n'ime Chineke site Onye -nwe -ayi Jisus Kraist, Onye ayi sitere n'aka -Ya nweta ezi -okwu.
Ndị Rom 6: 1-5, E liri anyị na ya site na baptism baa n'ọnwụ-ka anyị onwe anyị wee jegharịa na ndụ ọhụrụ
1 Gịnịzi ka anyị ga -ekwu? Ànyị ga -anọgide n'ime mmehie ka amara wee baa ụba? 2 Ọ dịghị ma ọlị! Olee otu anyị ndị nwụrụ nye mmehie ga -esi ebi n'ime ya? 3 Ị maghị nke ahụ anyị niile ndị e mere baptizim baa na Kraịst Jizọs bụ ndị e mere baptizim baa n'ọnwụ ya? 4 Ya mere, e liri anyị na ya site na baptism n'ime ọnwụ, ka, dị nnọọ ka e mere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie site n'ebube nke Nna, ka anyị onwe anyị kwa wee na -ejegharị na ndụ ọhụrụ.. 5 N'ihi na ọ bụrụ na e jikọrọ anyị na ya n'ọnwụ dịka ya, anyị na ya ga -adị n'otu na mbilite n'ọnwụ dị ka nke ya.
Ndị Rom 6: 6-11, Ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ maka mmehie-mana ndụ ọ na-adị, ọ na-adịrị Chineke
6 Ayi mara na akpọgidekọrọ Ya na madu ochie ayi n'obe, ka ewe me ka aru nke nmehie we ghara idi irè, ka ayi we ghara ibu orù nke nmehie ọzọ. 7 N'ihi na onye nwụworo anwụ nwere onwe ya na mmehie. 8 Ma ọ bụrụ na anyị na Kraịst nwụrụ, anyị kwenyere na anyị na ya ga -adịkọkwa ndụ. 9 Anyị maara na ebe emere ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, ọ gaghị anwụ ọzọ; ọnwụ enweghịzi ike n'ahụ ya. 10 Maka ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ maka mmehie, naanị otu ugboro, mana ndụ ọ na -adị, ọ na -adịrị Chineke. 11 Ya mere unu onwe -unu g considersikwa na unu bu ndi nwuru n'ebe nmehie di, na unu nādi ndu nime Chineke nime Kraist Jisus.
Ndị Rom 8: 1-4, Site n'izite Ọkpara nke ya n'oyiyi nke anụ ahụ mmehie-ọ katọrọ mmehie n'anụ ahụ
Ya mere, ugbu a enweghị ikpe maka ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs. 2 N'ihi na iwu nke Mmụọ nke ndụ nwere mee ka ị nwere onwe gị n'ime Kraịst Jizọs site n'iwu nke mmehie na ọnwụ. 3 N'ihi na Chineke emewo ihe iwu, n'anụ ahụ dara mbà, enweghị ike ime. Site n'izite Ọkpara nke ya n'oyiyi nke anụ ahụ na -eme mmehie na mmehie, ọ katọrọ mmehie n'anụ ahụ, 4 ka ewe mezu ihe ziri ezi n'iwu n'iwu nime ayi, ndi nāgaghi-eje dika anu-aru si di, kama dika Mmuo si di.
Ndị Rom 8: 31-34, Jizọs Kraịst (Mezaịa) nọ n'aka nri Chineke na-arịọchitere anyị arịrịọ
31 Gịnịzi ka anyị ga -ekwu banyere ihe ndị a? Ọ bụrụ na Chineke nọnyeere anyị, onye ga -emegide anyị? 32 Onye ahụ nke na -egbughị Ọkpara nke ya mana nyefere ya maka anyị niile, kedu ka ọ ga -esi ghara inye anyị ihe niile na ya? 33 Nye ga -ebo ndị Chineke họpụtara ebubo? Ọ bụ Chineke na -egosi na ọ bụ onye ezi omume. 34 Onye ga -ama ikpe? Kraịst Jizọs bụ onye nwụrụ - karịa nke ahụ, onye akpọlitere n'ọnwụ - onye nọ n'aka nri Chineke, onye na -arịọchitere anyị arịrịọ n'ezie.
1 Ndị Kọrịnt 15: 1-4, Nke kachasị mkpa-Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo
1 Ugbu a, m ga -echetara unu, ụmụnna m, ozi ọma nke m kwusara unu, nke unu natara, nke unu guzoro na ya, 2 na nke a na -eji azọpụta unu, ma ọ bụrụ na ị jidesie okwu m kwusara gị ike - ọ gwụla ma i kwere n'efu. 3 N'ihi na m nyefere gị n'aka gị mbụ mkpa ihe m natakwara: na Kraịst nwụrụ maka mmehie anyị dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, 4 na e liri ya, na a kpọlitere ya n'ụbọchị nke atọ dị ka Akwụkwọ Nsọ kwuru,
1 Pita 1: 18-21, Ọbara dị oke ọnụ ahịa nke Kraịst, dị ka nwa atụrụ na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ
18 ebe unu matara na agbapụtara unu n'uzọ efu nke nna nna unu hà ketara unu, ọ bụghị n'ihe ndị pụrụ ire ure dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, 19 kama site n'ọbara di oke ọnụ ahịa nke Kraist, dị ka nke nwa atụrụ na -enweghị ntụpọ ma ọ bụ ntụpọ. 20 Ebu ụzọ mara ya tupu a tọọ ntọala ụwa mana emere ka ọ pụta ìhè n'oge ikpeazụ n'ihi gị 21 ndi sitere n'aka -Ya kwere na Chineke, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, nye kwa Ya otuto, ka okwukwe -unu na olile -anya -unu di na Chineke.
Mkpughe 5: 6-10, Egburu gị, site n'ọbara gị ka ị gbapụtara ndị mmadụ maka Chukwu
6 Na n'etiti ocheeze ahụ na ihe anọ ahụ dị ndụ na n'etiti ndị okenye Ahụrụ m Nwa Atụrụ ka ọ na -eguzo dịka a ga -asị na e gbuola ya, nke nwere mpi asaa na anya asaa, nke bụ mmụọ asaa nke Chineke zitere n'ime ụwa niile. 7 O wee gaa were akwụkwọ mpịakọta ahụ n'aka nri nke onye ahụ nọ ọdụ n'ocheeze ahụ. 8 Mgbe o were akwụkwọ mpịakọta ahụ, ihe anọ ahụ dị ndụ na ndị okenye iri abụọ na anọ ahụ dara n'ihu Nwa Atụrụ ahụ, onye ọ bụla na-ejide ụbọ akwara, na iko ọlaedo juru n'ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, nke bụ ekpere ndị nsọ. 9 Ha we bù abù ọhu, si, I kwesiri ka i were akwukwọ -npiakọta ahu, meghe kwa akàrà -ya; n'ihi na egburu gị, ma site n'ọbara gị ị gbapụtara ndị mmadụ nye Chineke site n'ebo niile na asụsụ niile na ndị mmadụ na mba niile, 10 i we me ha ka ha buru ala -eze na ndi -nchu -àjà nye Chineke -ayi, ha ga -achịkwa ụwa. ”
Ndị Hibru bụ akwụkwọ dị oke mkpa maka ịghọta ihe kpatara o ji dị mkpa na ndokwa Chineke maka nzọpụta bụ mmadụ anụ ahụ na ọbara. Jizọs bụ onye ozi na onye isi nchụàjà nke nkwupụta anyị na onye isi nchụàjà ọ bụla bụ onye ogbugbo a họpụtara n'etiti mmadụ. Chineke abụghị mmadụ yabụ na ọ na -eji ndị ogbugbo mmadụ eje ozi dị ka ndị nnọchi anya ya. Ebe ọ bụ na, “A ga -eme ka ọ dị ka nwanne ya n'ihe niile,” ọ nwere ike nwee ọmịiko maka adịghị ike anyị.
Ndị Hibru 2: 5-9, I werela okpueze kpube ya- Nwa nke mmadụ, ị debe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya
5 N'ihi na ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka Chineke doro n'okpuru ụwa nke na -abịa, nke anyị na -ekwu maka ya. 6 A na -agba akaebe ebe, "Gịnị bụ mmadụ, na ị na -echeta ya, ma ọ bụ nwa nke mmadụ, ka i wee lekọta ya? 7 I mere ya ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi; I were nsọpuru na nsọpuru kpube ya okpu -eze, 8 na -edobe ihe niile n'okpuru ụkwụ ya. ” Ugbu a, ido onwe ya n'okpuru ihe niile n'okpuru ya, ọ hapụghị ihe ọ bụla n'okpuru ya. Ka ọ dị ugbu a, anyị ahụbeghị ihe niile n'okpuru ya. 9 Ma anyị na -ahụ onye ahụ e mere ka ọ dị ala karịa ndị mmụọ ozi, ya bụ, Jizọs, e kpubere ya ebube na nsọpụrụ nhụjuanya nke ọnwụ, ka o wee site na amara nke Chineke detụ ọnwụ ire maka mmadụ niile..
Ndị Hibru 2: 10-12, Onye na-edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi
10 N'ihi na o kwesiri ka onye ahu, onye ihe niile dị n'aka ya, site n'iweta ọtụtụ ụmụ n'ebube, kwesịrị ime ka onye nzọpụta ha zuo oke site na nhụjuanya. 11 N'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi. Ọ bụ ya mere na ihere anaghị eme ya ịkpọ ha ụmụnna, 12 sị, “Aga m akọrọ ụmụnne m aha gị; m ga -abụ abụ otuto n'etiti ọgbakọ. ”
Ndị Hibru 2: 14-18, a ga-eme ka ọ dị ka ụmụnne ya n'akụkụ niile, ka o wee bụrụ nnukwu onye nchụaja nwere obi ebere n'ozi Chineke.
14 Ebe ọ bụ na ụmụaka na -ekerịta anụ ahụ na ọbara, ya onwe ya ritekwara otu ihe ahụ, ka o site n'ọnwụ bibie onye ahụ nwere ike nke ọnwụ, ya bụ ekwensu, 15 ma napụta ndị niile site n'egwu ọnwụ nọ n'okpuru ịbụ ohu n'ogologo ndụ. 16 N'ezie ọ bụghị ndị mmụọ ozi ka ọ na -enyere aka, ma ọ na -enyere mkpụrụ Abraham aka. 17 Ya mere aghaghi ime ya dika umu -nne -ya n'ihe nile, ka o we ghọ onye -isi -nchu -àjà di ebere na onye kwesiri ntukwasi -obi n'ijere Chineke ozi., iji kpuchiere Chineke mmehie ha. 18 N'ihi na ebe ya onwe ya tara ahụhụ mgbe a na -anwa ya, o nwere ike inyere ndị a na -anwa aka.
Ndị Hibru 3: 1-2, Jizọs, onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị-kwesịrị ntụkwasị obi nye onye họpụtara ya
1 Ya mere, ụmụnna m dị nsọ, unu ndị na -ekere oke ọkpụkpọ eluigwe, tulee Jisos, onye ozi na nnukwu onye nchụàjà nke nkwupụta anyị, 2 onye kwesiri ntukwasi -obi nye onye họputara ya, dika Moses kwesiri ntukwasi -obi n'ulo Chineke nile.
Ndị Hibru 4: 14-16, Anyị enweghị nnukwu onye nchụàjà nke na-enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike anyị
14 Kemgbe ahụ anyị nwere nnukwu onye nchụàjà nke gabigara n'eluigwe, Jizọs, Ọkpara Chineke, ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike. 15 N'ihi na anyị enweghị nnukwu onye nchụàjà nke na -enweghị ike imetara anyị ebere n'adịghị ike anyị;. 16 Ka anyị were nkwuwa okwu bịaruo ocheeze amara nso, ka anyị wee nweta ebere wee chọta amara inye aka n'oge mkpa.
Ndị Hibru 5: 1-4, Onye isi nchụàjà ọ bụla bụ onye a họọrọ n'etiti mmadụ wee họpụta ya ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke
1 N'ihi na onye isi nchụàjà ọ bụla a họpụtara n'etiti mmadụ ka a họpụtara ka ọ rụọ ọrụ n'aha mmadụ n'ihe metụtara Chineke, ịchụ àjà na àjà maka mmehie. 2 O nwere ike jiri nwayọọ na -emeso ndị na -amaghị ihe na ndị na -enupụ isi ihe, ebe ọ bụ na ya onwe ya na -enwe adịghị ike. 3 N'ihi nke a, iwu ji ya ịchụ àjà maka mmehie nke ya dịka ọ na -achụ maka ndị mmadụ. 4 Ọ dịghịkwa onye na -ewere nsọpụrụ a nye onwe ya, kama ọ bụ naanị mgbe Chineke kpọrọ ya, dịka akpọrọ Erọn.
Ndị Hibru 5: 5-10, Chineke họpụtara Kraịst-onye Chineke họpụtara ịbụ nnukwu onye nchụàjà
5 Otú a kwa Kraist ebulighi onwe -ya elu ibu onye -isi -nchu -àjà, kama ọ bụ onye sịrị ya, “Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị”; 6 dika ọ n alsokwu kwa n'ebe ọzọ, si, Gi onwe -gi bu onye -nchu -àjà ebighi -ebi dika usoro Melkizedek si di. 7 N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs ji akwa akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọ arịrịọ, nye onye nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ, a nụkwara ya n’ihi nsọpụrụ ya. 8 N'agbanyeghị na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrube isi site na ahụhụ ọ tara. 9 Ebe emekwara ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 onye Chineke họpụtara ịbụ nnukwu onye nchụàjà dika usoro Melkizedek si dị.
Ndị Hibru 8: 1-6, Kraịst enwetala ozi-ọgbụgba ndụ ọ na-eme ka ọ ka mma
Ugbu a isi ihe anyị na -ekwu bụ nke a: ayi nwere onye -isi -nchu -àjà di otú a, onye nānọdu n'aka -nri nke oche -eze nke idi -elu n'elu -igwe, 2 onye ozi n'ebe nsọ, n’ezi ụlọ ntu nke Onyenwe anyị guzobere, ọ bụghị mmadụ. 3 N'ihi na a na -ahọpụta nnukwu onye nchụàjà ka ọ na -enye onyinye na àjà; otu a ọ dị mkpa ka ụkọchukwu a nweekwa ihe ọ ga -enye. 4 Ugbu a ọ bụrụ na ọ nọ n'ụwa, ọ gaghị abụ onye nchụàjà ma ọlị, ebe enwere ndị nchụàjà na -enye onyinye dị ka iwu si dị. 5 Ha na -ejere nnomi na onyinyo nke ihe dị n'eluigwe. N'ihi na mgbe Mozis na -achọ iwuli ụlọikwuu ahụ, Chineke ziri ya ozi, na -asị, "Hụ na ị ga -eme ihe niile dịka ụkpụrụ ahụ nke egosiri gị n'ugwu." 6 Mana ka ọ dị, Kraịst enwetala ozi nke dị mma karịa nke ochie dịka ọgbụgba ndụ ọ na -agbaziri ya ka mma, ebe ọ bụ na etinyere ya na nkwa ndị ka mma.
Ndị Hibru 9: 11-14, Ọ batara n'ebe nsọ site n'ọbara nke ya
11 ma mgbe Kraịst pụtara dị ka nnukwu onye nchụàjà nke ihe ọma ndị bịara, mgbe ahụ, site na nnukwu ụlọikwuu ahụ zuru oke (nke ejiri aka mee, ya bụ, abụghị nke okike a) 12 ọ banyere n'otu ebe naanị otu ugboro, ọ bụghị site n'ọbara ewu na nke nwa ehi kama site n'ọbara nke ya, si otú a na -echekwa mgbapụta ebighị ebi. 13 N'ihi na asi na ọbara ewu na oke -ehi, na ifesa nke ndi emeruru emeru na ntu nwa -abiferọghọ, edoro nsọ nsọ ime anu -aru. 14 lee ka ọbara Kraịst, onye sitere na Mmụọ ebighi ebi were chụọ onwe ya n'àjà nye Chineke enweghị mmerụ, ga -asachapụ akọ na uche anyị pụọ n'ọrụ nwụrụ anwụ ijere Chineke dị ndụ ozi..
Ndị Hibru 9: 15-22, Ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ
15 Ya mere ọ bụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, ka ndị a kpọrọ wee nata ihe nketa ebighi -ebi ekwere na nkwa, ebe ọ bụ ọnwụ nwụọ nke na -agbapụta ha site na mmebi iwu ndị e mere n'okpuru ọgbụgba ndụ nke mbụ. 16 N'ihi na ebe ọ gụnyere ime uche, a ga -ehiwe ọnwụ nke onye mere ya. 17 N'ihi na uche na -eme naanị mgbe mmadụ nwụrụ, ebe ọ naghị adị ire ma ọ bụrụhaala na onye mere ya dị ndụ. 18 Ya mere ọbuná ọb covenantub covenanta -ndu mbu, ọ dighi nmalite n withoutjighi ọbara. 19 N'ihi na mgbe ekwusara mmadụ niile iwu nke Moses, ọ were ọbara ụmụ ehi na ewu, na mmiri na ajị anụ na -acha uhie uhie na ahịhịa hisop, wee fesa ma akwụkwọ ahụ n'onwe ya ma mmadụ niile, 20 sị, "Nke a bụ ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ nke Chineke nyere unu n'iwu." 21 Ọ we were ọbara ahu fesa kwa ulo -ikw tent ahu na ihe nile nke ifè òfùfè. 22 N'ezie, n'okpuru iwu, ọ fọrọ nke nta ka ihe niile jiri ọbara mee ihe, ọ bụrụ na ịwụsị ọbara enweghị mgbaghara mmehie.
Ndị Hibru 9: 23-28, Kraịst abanyela n'eluigwe, ka ọ pụta ugbu a n'ihu Chineke n'aha anyị
23 N'ihi ya, ọ dị mkpa ka e jiri ememme ndị a mee ka nnomi nke ihe ndị dị n'eluigwe dị ọcha, kama jiri ihe ka mma chụọ àjà nke eluigwe. 24 N'ihi na Kraist abatawo, ọ bụghị n'ebe nsọ ndị e ji aka mee, bụ́ ihe atụ nke ihe bụ eziokwu, kama banye n'eluigwe n'onwe ya, ugbu a ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị. 25 Ọ bụghịkwa iji onwe ya chụọ àjà ugboro ugboro, ebe nnukwu onye nchụàjà na -abata ebe nsọ kwa afọ na ọbara na -abụghị nke ya, 26 n'ihi na mgbe ahụ ọ gaara ata ahụhụ ugboro ugboro kemgbe mmalite nke ụwa. Ma otu ọ dị ugbu a, ọ pụtara otu ugboro na ngwụcha afọ niile iji wepụ mmehie site n'ịchụ onwe ya n'àjà. 27 Dịkwa ka a kara aka na mmadụ ga -anwụ otu ugboro, emesịa ikpe ga -abịa, 28 otua ka Kraist, ebe achuru ya aja ka oburu nmehie nke otutu madu, ga -apụta nke ugboro abụọ, ọ bụghị ime mmehie, kama ịzọpụta ndị na -eche ya.
Ndị Hibru 10: 5-10, Abịara m ime uche gị, Chineke, dịka e dere banyere m
5 N'ihi ya, mgbe Kraịst bịara n'ụwa, ọ sịrị, “Ị chọghị àjà na onyinye, kama ị kwadebere m anụ ahụ; 6 n'àjà nsure ọkụ na àjà mmehie adịghị atọ gị ụtọ. 7 M'we si, Le, Abịala m ime uche gị, Chineke, dịka e dere banyere m n'akwụkwọ mpịakọta'" 8 Mgbe o kwuru n'elu, “Ị chọghị ma ọ bụ nwee mmasị na àjà na onyinye na àjà nsure ọkụ na àjà mmehie” (a na -enye ha dịka iwu si dị), 9 mgbe ahụ ọ gbakwụnyere, "Lee, abịara m ime uche gị." Ọ na -ewepụ nke mbụ iji guzobe nke abụọ. 10 Ọ bu kwa site n'ọchichọ ahu ka edoro ayi nsọ site n'ichu aru Jisus Kraist otù ub forò.
Ndị Hibru 10: 11-21, Ọhụrụ na ụzọ ndụ nke o megheere anyị site na ákwà mgbochi, ya bụ, site n'anụ ahụ ya
11 Onye nchụàjà ọ bụla na -eguzo kwa ụbọchị na -ejere ya ozi, na -achụ otu àjà ahụ ugboro ugboro, nke na -enweghị ike iwepụ mmehie. 12 Ma mgbe Kraịst chụrụla aja otu oge maka mmehie, ọ nọdụrụ ala n'aka nri Chineke, 13 na -eche site n'oge ahụ ruo mgbe a ga -eme ndị iro ya ihe mgbakwasị ụkwụ ya. 14 N'ihi na site n'otu onyinye, o mere ka ndị a na -edo nsọ zuo oke ruo mgbe niile. 15 Na Mmụọ Nsọ na -agbara anyị ama; n'ihi na mgbe i kwusịrị, 16 “Nke a bụ ọgbụgba ndụ nke mụ na ha ga -eme mgbe ụbọchị ndị ahụ gasịrị, ka Jehova kwuru: aga m etinye iwu m n’obi ha, deekwa ha n’obi ha. 17 mgbe ahụ ọ gbakwụnyere,
"Agaghị m echetakwa mmehie ha na omume mmebi iwu ha ọzọ." 18 N'ebe mgbaghara nke ndị a, a naghịzi achụ àjà maka mmehie ọzọ.19 Ya mere, ụmụnna m, ebe ọ bụ na anyị nwere obi ike ị banye ebe nsọ site n'ọbara Jizọs, 20 site n'ụzọ ọhụrụ na nke dị ndụ nke o megheere anyị site na ákwà mgbochi, ya bụ, site n'anụ ahụ ya, 21 ebe ayi nwe -kwa -ra onye -nchu -àjà uku n'ulo Chineke 22 ka anyị were ezi obi bịaruo nso na nkwenye siri ike nke okwukwe, were fesa obi anyị dị ọcha pụọ ​​n'akọ na uche ọjọọ wee were mmiri dị ọcha sachaa ahụ anyị.
Ndị Hibru 12: 1-2, Jizọs tachiri obi n'obe wee nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke
1 Ya mere, ebe anyị nwere oke igwe nke ndị akaebe gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụkwa ibu ọ bụla na mmehie nke jidesiri anya ike, ka anyị werekwa ntachi obi gbaa ọsọ ahụ e debere n'ihu anyị, 2 anyị na -elegara Jizọs anya, bụ onye guzobere okwukwe anyị na onye mezuru ya, onye, ​​n'ihi ọ joyụ e debere n'ihu ya, tachiri obi n'obe, na -eleda ihere anya, ọ nọdụ ala n'aka nri nke ocheeze Chineke.
Ndị Hibru 12: 22-24, Jizọs, onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ
22 Mana ị bịarutela ugwu Zaịọn na obodo nke Chineke dị ndụ, Jerusalem nke eluigwe, na ọtụtụ ndị mmụọ ozi na nnọkọ oriri, 23 nye nzukọ nke ndị e bu ụzọ mụọ ndị edebara aha ha n'eluigwe, nyekwa Chineke, onyeikpe nke mmadụ niile, na mmụọ nke ndị ezi omume e mere ka ha zuo oke, 24 na Jesus, onye onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ, na ọbara a fesara efesa nke na -ekwu okwu dị mma karịa ọbara Ebel.
Ndị Hibru 13: 20-21, Onyenwe anyị Jizọs, nnukwu onye ọzụzụ atụrụ
20 Ma ub theu a ka Chineke nke udo, Onye mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie Onyenwe anyị Jizọs, nnukwu onye ọzụzụ atụrụ, site n'ọbara ọgbụgba ndụ ebighi ebi, 21 kwadebe unu ihe ọma niile ka unu wee mee uche ya, na -arụ ọrụ n'ime anyị ihe dị mma n'anya ya, site na Jizọs Kraịst, onye otuto dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen.
N'ime Agba Ọhụrụ, Jizọs na -akọwa onwe ya dị ka ndị ọzọ kọwara ya dị ka onye na -ejere Chineke ozi
Jọn 8:40, “Mụ onwe m, onye gwara unu eziokwu nke m nụrụ n'ọnụ Chineke”
Onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi (Ndị Hibru 2:11). Otu Chineke na Nna bụ Chineke na Nna Jizọs.
John 17: 1-3, Gị bụ naanị ezi Chineke na Jizọs Kraịst onye zitere
Ọlụ Ndị Ozi 4:26, imegide Onyenwe anyị na imegide Onye o tere mmanụ
3 Ka amara na udo dịrị gị sitere na Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, 4 Onye nyere onwe ya maka mmehie anyị iji napụta anyị n'ajọ oge a. dika uche nke Chineke na Nna ayi si di, 5 otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen
1 Ndị Kọrịnt 11: 3, Isi nke Kraịst bụ Chineke
Ndị Hibru 2:11, Onye na -edo nsọ (Jizọs) na ndị edoro nsọ niile nwere otu ebe
11 N'ihi na onye na -edo nsọ na ndị edoro nsọ niile nwere otu isi. Ọ bụ ya mere na ihere anaghị eme ya ịkpọ ha ụmụnna
5 Otú a kwa Kraist ebulighi onwe -ya elu ibu onye -isi -nchu -àjà, kama ọ bụ onye sịrị ya, "Ị bụ Ọkpara m, taa amụọla m gị"; 6 dika ọ n alsokwu kwa n'ebe ọzọ, si, Gi onwe -gi bu onye -nchu -àjà ebighi -ebi dika usoro Melkizedek si di. 7 N’ụbọchị anụ ahụ ya, Jizọs ji akwa akwa na anya mmiri were ekpere na ịrịọ arịrịọ, nye onye nwere ike ịzọpụta ya n’ọnwụ, a nụkwara ya n’ihi nsọpụrụ ya. 8 N'agbanyeghị na ọ bụ nwa nwoke, ọ mụtara nrube isi site na ahụhụ ọ tara. 9 Ebe emekwara ka o zuo oke, ọ ghọrọ isi iyi nke nzọpụta ebighi ebi nye ndị niile na -erubere ya isi, 10 onye Chineke họpụtara ịbụ nnukwu onye nchụàjà dika usoro Melkizedek si dị.
Ndị Hibru 9:24, Kraịst banyere n'eluigwe ịpụta n'ihu Chineke n'aha anyị
Chineke bụ onye mbụ na ihe kpatara nzọpụta. Ewezuga Chineke, onweghị ndokwa maka nzọpụta. Agbanyeghị Chineke na -arụ ọrụ site n'aka ndị ọrụ mmadụ iji mezuo atụmatụ ya, a pụkwara ikwu na ha bụkwa ndị nzọpụta. Ndị ọrụ mmadụ bụ ihe dị nso ma ọ bụ nke abụọ na -ebute nzọpụta. Ndị nzọpụta bụ mmadụ nke Chineke họpụtara ka ha mee ntuziaka ya. Ndị nzọpụta bụ ndị na -arụ ọrụ dị ka ndị ohu Chineke imejupụta atụmatụ Chineke maka nzọpụta. N'agbanyeghị mbọ ndị ọrụ mmadụ na -agba, enweghị nzọpụta ma e wezụga Chineke.
Isaiah 43: 10-11, "Abụ m Jehova (Jehova), ma e wezụga m ọ dịghị onye nzọpụta"
10 "Unu bụ ndị akaebe m, ”ka Jehova kwuru, “Na nke m ohu nke m họpụtara, ka unu wee mara wee kwere m wee ghọta na ọ bụ m bụ ya. N'iru m ọ dịghị chi ọ bụla a kpụrụ, ọ dịghịkwa onye ga -eso m. 11 I, Abụ m Jehova, ma e wezụga m ọ dịghị onye nzọpụta dị.
Isaiah 45:21, “Abasi edinen ido ye Andinyan̄a; ọ dịghị onye ọzọ ma e wezụga m ”
21 Kwupụta ma gosipụta okwu gị; ka ha gbakọọ izu ọnụ! Onye gwara nke a ogologo oge gara aga? Ònye gosiri ya site na mb olde ochie?
Ọ́ bụghị m, Jehova? Ọ dịghịkwa chi ọzọ e wezụga m, a Chineke nke ezi omume na Onye nzọpụta; ọ dịghị onye ọzọ ma e wezụga m
Hosia 13: 4, Ị maghị Chineke ma e wezụga m, ma e wezụga m ọ dịghị onye nzọpụta dị
4 Ma Mu onwem bu Jehova Chineke -gi site n'ala Ijipt; Ị maghị Chineke ma e wezụga m, ma e wezụga m ọ dịghị onye nzọpụta dị.
2 Samuel 3:18, "Site n'aka ohu m Devid, aga m azọpụta ndị m Izrel"
18 Ugbu a, meenụ ya, n'ihi na Jehova ekwela Devid nkwa, sị,Site n'aka ohu m Devid, aga m azọpụta ndị m Izrel n'aka ndị Filistia, nakwa n'aka ndị iro ha niile. '”
NEHEMAIA 9:27 I nyere ha ndi -nzọputa, ndi zọputara ha n'aka ndi -iro -ha
27 I we nye ha n'aka ndi -iro -ha, bú ndi n mademekpa ha aru. Na mgbe ha na -ata ahụhụ, ha tikuru gị ma ị nụrụ olu ha site n'eluigwe, dịka oke ebere gị siri dị I nyere ha ndị nzọpụta nke zọpụtara ha n'aka ndị iro ha.
Luk 2: 11-14, Onye amụrụ nye gị taa bụ Onye nzọpụta, onye bụ Kraịst Onyenwe anyị. (onye bụ Onyenwe anyị Mesaịa)
11 N'ihi na Onye -nzọpụta ka amụrụ nye unu taa n'obodo Devid, onye bu Kraist Onye nwe anyi. 12 Nka gābu-kwa-ra unu ihe-iriba-ama: unu gāhu nwa ọhu n'úkwù, nādina kwa n'ihe anētiye nri anu-ulo. 13 Ma na mberede, ìgwè mmụọ nke igwe eluigwe nọ na mmụọ ozi ahụ na-eto Chineke ma sị, 14 "Ka otuto dịrị Chineke kachasị elu, udo dịkwa n'elu ụwa n'etiti ndị ihe ya masịrị ya."
Ọrụ 5: 30-31, Chineke buliri Jizọs elu n'aka nri ya dịka onye ndu na onye nzọpụta
30 Chineke nke nna-ayi-hà mere ka Jisus bilie, Onye I b͕uru site n'osisi Ya n'elu osisi. 31 Chineke buliri ya elu n'aka nri ya dịka Onye ndu na onye nzọpụta, inye Izrel nchegharị na mgbaghara mmehie.
Ọrụ 13: 22-23, Chineke ewetara Izrel onye nzọpụta bụ Jizọs dịka o kwere na nkwa
22 Mgbe ọ wepụrụ ya, ọ kpọlitere Devid ịbụ eze ha, onye ọ gbara ama maka ya wee sị, 'Achọpụtala m na Devid nwa Jesi otu nwoke dị ka obi m si chọọ, onye ga -eme ihe niile m na -achọ.' 23 Nime nkpuru nwoke a, Chineke wetara Israel Onye nzọpụta, Jizọs, dịka o kwere na nkwa.
1 Timoti 1: 1-2 Chineke nke nzọpụta anyị na nke Kraịst Jisọs olileanya anyị
1 Pọl, onye -ozi nke Kraịst Jisọs site n'iwu nke Chineke onye nzọpụta anyị na nke Kraịst Jisọs olileanya anyị, 2 Ekele diri Timọti, ezi nwa m n'okwukwe: Amara, ebere na udo sitere na Chineke Nna na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.
2 Timoti 1: 8-10, Chineke zọpụtara anyị maka ebumnuche na amara ya
8 Ya mere, emela ihere ịgba akaebe banyere Onyenwe anyị, ma ọ bụ mụ onwe m bụ onye mkpọrọ ya, kama soro na -ata ahụhụ maka ozi ọma site n'ike nke Chineke, 9 Onye zọpụtara anyị wee kpọọ anyị oku dị nsọ, ọ bụghị n'ihi ọrụ anyị kama ọ bụ maka ebumnuche na amara nke ya, nke o nyere anyị n'ime Kraịst Jizọs tupu afọ niile amalite., 10 nke egosikwara ugbu a site na mpụta nke Onye Nzọpụta anyị Kraịst Jizọs, onye kagburu ọnwụ wee wetara ndụ na anwụghị anwụ ìhè site na ozioma.
Taịtọs 1: 1-4, n'olileanya nke ndụ ebighi ebi, nke Chineke kwere na nkwa tupu ụwa amalite
1 Paul, odibo nke Chineke na onye ozi nke Jizọs Kraịst, n'ihi okwukwe nke ndị Chineke họpụtara na ihe ọmụma ha banyere eziokwu ahụ, nke kwekọrọ na nsọpụrụ Chineke, 2 n'olileanya nke ndụ ebighi ebi, nke Chineke, onye na -adịghị agha ụgha, kwere nkwa ya tupu oge amalite 3 na egosipụtara n'oge ya n'okwu ya site na nkwusa nke enyere m n'iwu Chineke Onye Nzọpụta anyị; 4 Taịtọs, ezi nwa m n'otu okwukwe: Amara na udo site na Chineke Nna na Kraịst Jizọs Onye Nzọpụta anyị.
1 Jọn 4:14, Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye nzọpụta nke ụwa
Anyị ahụwokwa na -agba akaebe na Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ Onye nzọpụta nke ụwa.
Jud 1:25 Chineke, Onye nzọpụta anyị, site na Jizọs Kraịst Onyenwe anyị
25 diri Chineke nke nání ya, Onye -nzọputa -ayi, site n'aka Jisus Kraist Onye -nwe -ayi, bụrụ otuto, ịdị ukwuu, ịchịisi, na ikike, tupu oge niile na ugbu a ma ruo mgbe niile. Amen.
Chineke ahọrọla Jizọs ka ọ kpee ikpe ma chịa ụwa n'ezi omume n'ihi na ọ bụ mmadụ (Nwa nke mmadụ). Nke a bụ ebumnuche Chineke nke o buru ụzọ kwuo site n'ọnụ ndị amụma.
Luk 12: 8-9, Nwa nke mmadụ kwenyere ma gọnarị n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke
8 “Ana m asị unu, onye ọ bụla nke na -ekwupụta m n'ihu mmadụ, Nwa nke mmadụ ga -ekwupụtakwa n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke, 9 ma onye na-agọnahụ m n'ihu ndị mmadụ ga-agọnahụ ya n'ihu ndị mmụọ ozi nke Chineke.
Luk 22: 67-71, "Site ugbu a Nwa nke mmadụ ga-anọ ọdụ n'aka nri nke ike nke Chineke"
67 "Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gwa anyị." Ma ọ sịrị ha, “Ọ bụrụ na m agwa unu, unu agaghị ekwe, 68 ọ buru kwa na ajum unu ihe, unu azaghi; 69 Ma site ugbu a gaa n'ihu, Nwa nke mmadụ ga -anọ ọdụ n'aka nri nke ike nke Chineke. " 70 Ya mere ha nile sịrị, “Ị bụ Ọkpara Chineke?” O we si ha, Unu onwe -unu nāsi na Mu onwem bu ya. 71 Ha we si ya, Gini bu nkpà nkpà nke ayi nāchọ? Anyị onwe anyị anụwo ya site n'egbugbere ọnụ ya. ”
Ọrụ 17: 30-31, Ọ ga-ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka nwoke ọ họpụtara
Jọn 5: 25-29, O nyere ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ
25 N'ezie, n'ezie, ana m asị unu, oge awa na -abịa, ọ dịkwa ugbu a, mgbe ndị nwụrụ anwụ ga -anụ olu Ọkpara Chineke, ndị nụrụ ya ga -adịkwa ndụ. 26 N'ihi na dika Nnam nwere ndu nime onwe -ya, otú a ka O nye -kwa -ra Ọkpara -Ya inwe ndu nime Onwe -ya. 27 O nyewokwa ya ikike ikpe ikpe, n'ihi na ọ bụ Nwa nke mmadụ. 28 Ka ihe a ghara iju unu anya, n'ihi na oge awa na -abịa mgbe ndị niile nọ n'ili ga -anụ olu ya 29 puta -kwa -ra, ndi mere ezi ihe rue nbilite -n'ọnwu nke ndu, ndi mere ajọ ihe gābilite na nbilite -n'ọnwu nke ikpé.
1 Ndị Tesalonaịka 1: 9-10, Jizọs onye na-anapụta anyị n'iwe na-abịa
9 N'ihi na ha onwe -ha nākọ akukọ bayere ayi udi ọbìa nke ayi nwere n'etiti unu, na otú unu si chigharikute Chineke ka unu we fè Chineke di ndu na ezi Chineke, 10 na ichere Ọkpara ya site n'eluigwe, onye ọ kpọlitere n'ọnwụ, Jizọs onye na -anapụta anyị n'iwe na -abịa.
2 Ndị Tesalonaịka 1: 5-9, mgbe a ga-ekpughe Onyenwe anyị Jizọs site n'eluigwe ya na ndị mmụọ ozi ya
5 Nke a bụ ihe akaebe nke ikpe ziri ezi nke Chineke, ka e wee gụọ gị dị ka onye ruru ala -eze Chineke, nke ị na -atakwa ahụhụ maka ya— 6 ebe ọ bụ na Chineke na -ewere ya na ọ bụ naanị iji mkpagbu kwụghachi ndị na -emekpa gị ahụ, 7 na ime ka unu nwere ahụ iru ala dị ka anyị, mgbe ekpughere Onyenwe anyị Jizọs site n'eluigwe ya na ndị mmụọ ozi ya dị ike 8 n'ọkụ na -enwu enwu, na -abọ ọbọ n'ahụ ndị na -amaghị Chineke na ndị na -adịghị erube isi n'ozi ọma nke Onyenwe anyị Jizọs.. 9 Ha ga -ata ahụhụ ntaramahụhụ nke mbibi ebighị ebi, pụọ n'ebe Onyenwe anyị nọ na site n'ebube nke ike ya
1 Timoti 2: 5-6 gụnyere eziokwu bụ isi nke Oziọma ahụ.
1 Timoti 2: 5-6, Otu onye ogbugbo dị n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Jizọs Kraịst (Mezaịa ahụ)
A na -esi na Jizọs dị iche na Chineke n'ụzọ anọ Isi ihe ndị a dị oke mkpa maka nghọta anyị banyere onye Chineke bụ na Jizọs na ọdịiche dị n'etiti ha abụọ:
Jizọs bụ onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ,
Akụkụ anọ a nke onye Jizọs bụ na -ekwusi ike na mmadụ nke Jizọs bụ isi n'ozi ozioma. Ọ kwesịrị ịpụta nke ọma, na dịka ụkpụrụ ndị a siri dị, Jizọs bụ “Chukwu” dị ka onye nnọchi anya Chineke (dabere na echiche nke inye ikike) mana ọ bụghị n'echiche nke ọnụnọ nkịtị.